Kuthe ixesha elide ibheji ithathwa njengoluhlobo oluqinisekileyo lwezifo ezininzi kunye nezifo. Ibheti ayinceda nje kuphela ukugcina impilo kunye nolutsha, kodwa nayo iyisisombululo esisebenzayo ekulwa ne-cellulite.
Ubhedu kwi-cellulite yindlela efanelekileyo kakhulu, kwaye akumangalisi, into yokuba iinjongo eziyinhloko ze-cellulite zitshintsho kwinqanaba le-fat-cut subcutaneous, ekunciphiseni ukujikeleza kwegazi kunye nokunciphisa umjelo we-lymphatic. Ekuhlambeni ngaphantsi kwefuthe lokushisa okuphezulu, ukujikeleza kwegazi kukhawuleza, ngenxa yokuba iiseli zizaliswe ngomoya okhuselekileyo, kwaye amafutha ahlukana nakwezona ziqendu ezilukhuni kunye nobunzima kakhulu kwesikhumba ezikhoyo kwezinye iindlela. Ngethuba elifanayo, ii-pores zivuliwe, kwaye i-slags iphuma kunye kunye nesithukuthezi. Ngaloo ndlela, ukutyelela rhoqo kunokunciphisa kakhulu i-cellulite.
Kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa ibhafu ukulwa ne-cellulite. Indlela elula kakhulu ukukhetha ukushisa okuphezulu kunye okuphantsi ngaphandle kokusebenzisa izixhobo ezongezelelweyo kunye nokusila. Ngale ndlela indlela yokuqala ekamelweni lomlambo iyilungiselelo kwaye ihlala imizuzu engama-4 ukuya kwemihlanu, ngaphambi kokuba kuqale ukujuluka okukhulu. Emva koko landela isigaba sokuphumla kwigumbi lokulinda elingu-5-10 imizuzu. Ukuze ufezekise umphumo ongcono we-cellulite, kufuneka uphinda uvakatye olude olude kwigumbi le-steam, ulandelwe yindawo yokuphumla e-cool room izikhathi ezili-3-4. Ngenxa yolu hlobo lwenkqubo, ukujikeleza kwegazi kukhawuleza, kukho ukwahlukana okuqhubekayo kwamathambo angaphantsi kunye nokususwa kunye kunye nokujuluka, kwaye i-cellulite iyancitshiswa kakhulu.
Ubhubhe kwi-cellulite buya kusebenza ngakumbi xa udibanisa uhambo oluya kwi-therma nge-massage kunye ne-wrapping. Iskimu so kubhalwa kwe-anti-cellulite silula: ngexesha lokuqala singena kwigumbi le-steam imizuzu engama-4-5, ngeli thuba umzimba uphucula kwaye ulungiselelwe iinkqubo ezongezelelekileyo zokuzicoca. Emva koko shiya kwigumbi lomphunga uze uhlale kwindawo epholileyo imizuzu emi-5-10. Okwesibini ukungena kwi-vat, bhinqa umzimba ngombhobho wokusilalisa kwisistim setyhula ngokubhekiselele kwi-bottom up.
Ngethuba elichitha ixesha lokubhukuda, ii-pores zinexesha lokuvula, kwaye i-slags yaqalisa ukuphuma. Qinisekisa oku kusebenza, kunye nokucima iipilisi zonke izihlambuluki ziya kunceda ukutshiza ngesityuwa nobusi. Ukuze ulungiselele ukuhluma, uthathe iipunipoli zetyuwa ezi-2, (qiniseka ukuba iityuli zetyuwa azikhulu kakhulu, ngaphandle koko ziyakwazi ukukhangela isikhumba) kwaye zidibanise neepunipoyi ezi-2 zamanzi, kungekhona ubusi obubiweyo. Ukuphucula umonakalo olwa-cellulite, faka amanqatha amathathu eoli ebalulekileyo ye-lemon, i-orange okanye i-mandarin, xuba kakuhle. Faka isicelo sokutshiza kwiinkalo zengxaki kwisistim setyhula, ukuhlalisa imizuzu embalwa. Emva koko bhonkotha kwiphepha uze uhlale kwigumbi lomqhubi elinye imizuzu emihlanu. Emva kolu xesha, shiya kwigumbi le-steam uze uhlambe i-scrub, uhlale kwindawo epholileyo imizuzu eyi-10.
Kaloku ulusu lucocekile kwaye lukulungele ukuthatha izinto ezisebenzayo, eli lixesha elifanelekileyo lokufaka ikhofi. Faka isicelo kwiinkalo zeengxaki zekhofi, gquba ifilimu uze ushiye imizuzu eyi-15. Emva koko susela ngamanzi afudumeleyo. Faka isicelo sikhilimu enomsoco okanye ioli yeoli ekhumbeni.
Njengomphumo wokudibanisa ibhedi, ukusilalisa, ukukrazula nokugubungela, i-cellulite inokukhawuleza, ulusu luba lukhuni, luba lula kwaye lukhulu.
Ukuhlamba umncedisi wakho othembekileyo ekulwa ne cellulite kwanele ukulandela imithetho embalwa elula:
Ngaphambi kokutyelela ibhedi kufuneka kushiywe ukutya okunamafutha kunye nokutya okunzima. Kunconywa ukunciphisa ukutywala okulula, umzekelo isaladi okanye i-yogurt, ngaphaya kweeyure ezingama-2 ngaphambi kokutyelela ibhafu. Musa ukuwuyeka lo mgaqo, kuba ngaphantsi kwefuthe lokushisa okuphezulu, ukuxutywa kweetekisi ezisuka emathunjini kukhawuleza kwigazi;
Lungiselela ukunyuka kwamanzi kwimihlaba kwaye uthabathe kunye nawe kwi-thermos. Emva kweenkqubo zokuhlambela, ukusetyenziswa kwesi sithintelo kukukhuthaza ukukhawuleza kwe-metabolism kunye ne-metabolism emzimbeni, okubangelwa ukutshisa ngokukhawuleza kwamathambo angaphantsi kunye ne-cellulite yehla;
Ngaphambi kokuba ungene kwigumbi le-steam, thatha ishushu eshushu;
khumbula ezinye iinkcazo zokutyelela ibhedi, umzekelo, izifo zesistim senhliziyo;
ungalindelanga umphumo osheshayo ukuphumeza umphumo obonakalayo, kufuneka u tyelele ibhedi 1-2 ngamaxesha rhoqo ngeveki rhoqo kwiinyanga eziliqela.
Ibhedi yindlela eyongezelelweyo yokulwa ne-cellulite, ukuze ulahleke ngokupheleleyo i-cellulite, kuyadingeka indlela efanelekileyo ebandakanya ukutya okunempilo, ukuzivocavoca, ukucocela kunye nokusetyenziswa kwezimonyo.
Inkukhu yesibindi kunye nama-mushroom kwi-ukhilimu omuncu
Imidwebo yesinyathelo ngeyinyathelo enomxholo othi "I-autumn" kwi-kindergarten kunye namabakala 1-5 - iiklasi zeeklasi kunye neepensile kunye neepende
Izinwele: ukuxilwa kwexesha
Izinzuzo kunye neenkunkuma zeesoya
Ikhekhe le-carrot yase-Brazil